Saafi Films - News: Isticmaalkii Ayuutada oo sii yaraanaya Maxay tahay sababta ?
Isticmaalkii Ayuutada oo sii yaraanaya Maxay tahay sababta ?
Waxaa sii yaraanaya isticmaalka Ayuutada oo mudooyin sii horeeyay si aad ah ugu fidey meelo badan oo dalka ka mid ah, iyadoo iminkana meelaha qaar ayba ka joogsadeen.
Magaalada Muqdisho ayuu aad ugu yaraanayaa isticmaalka Ayuutada oo waayadii hore ay si waali ah u isticmaali jireen haweenka xaasaska ah iyo kuwa aan ahaynba, inkastoo ay jireen rag ayuutadaasi ku lug lahaa.
"Walaahi mudadan maba arag dad isticmaalaya, waxaana is dhihi karaa, is qabqabsigii oo batay ayaa keenay in la iska dhaafo, ama sidii la rabay loo isticmaali waayo" sidaasi waxaa yiri Aamino C/lle oo aan kala sheekeystay.
"ma aqaan baahidii loo qabay ayuutada miyaa dhamaatay, si ayaa isaga dhaafey" sidaasi waxaa igu tiri Caasho Nuur oo aan wax ka weydiiyay.
Ayuutada oo ay jiraan dad badan oo ku wax qabsadey, hadana waxaa aad u badnaa dadka sida xun ay u sameysay, sida qoysaska ku burburay.
samira on October 17 2012 ·
4,527,213 unique visits